अभिनेता टाइगर श्राफसंग जोडि बाध्दै करिना कपुरकी सोतेनी छोरी सारा – Wow Sansar
अभिनेता टाइगर श्राफसंग जोडि बाध्दै करिना कपुरकी सोतेनी छोरी सारा
February 11, 2021 158
मुम्बई । बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफ नयाँ फिल्म बागी ४ मा अनुबन्धित भएका छन् । बागीको तेस्रो शृंखला पनि सफल भएपछि बागी–४ बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यो फिल्ममा पनि विगतका तीन शृंखलाजस्तै नायकको रूपमा टाइगर श्राफ नै अनुबन्धित भएका छन् ।
यो फिल्ममा टाइगरको नायिकाको रूपमा सारा अली खान अनुबन्धित भएकी छन् । यो फिल्ममा यसअघि दिशा पटानी नायिकाको रूपमा अनुबन्धित हुने चर्चा थियो । तर, निर्माता साजिद नाडियाडवालाले यसमा सारा अली खानलाई अनुबन्धित गरेका हुन् ।
अभिनेत्री सारा पहिलोपटक टाइगरसँग यो फिल्ममा जोडिएकी हुन् । यसअघि सारा र टाइगरले फिल्म हिरोपन्ती–२ मा काम गर्ने भनिएकोमा सो फिल्ममा अन्य नायिका राखिएको थियो । साजिदले हिरोपन्ती–२ मा उनलाई राख्न राख्न नपाएपछि यतिबेला बागी–४ मा अनुबन्धित गरेको बताएका छन् ।राजधानि दैनिकमा खबर छ ।
आफू बागी–४ का लागि निकै उत्साहित रहेको अभिनेत्री साराले बताएकी छन् । यो एक्सन प्रधान फिल्मका लागि आफूले सोहीअनुसारको तयारी गरेको पनि उनले बताएकी छन् । फिल्म बागीको पहिलो शृंखला २०१६ मा बनेको थियो । बागी हिट भएपछि अभिनेता टाइगरकै अभिनयमा फिल्म बागी–२ र बागी–३ निर्माण गरिएको थियो । बागीका–३ वटै शृंखला हिट भएपछि बागी–४ को निर्माण गर्न लागिएको हो । यो फिल्म अब छायांकनमा जानेछ ।
Prevरामकुमारी लाइ पक्राउ गर्न जाँदा झाँक्रीको निवासअगाडि कार्यकर्ताले लगाए नाराबाजी, ठूलो संख्यामा दंगा प्रहरी पनि परिचालन (भिडियो सहित)
Nextआमाको काखवाट खोसेर बुवाले एक महिनाको सन्तानलाई जब ७० हजारमा बेचे
मिल्ने भए दुःख हटाइ खुशी किन्थेँ आमा भन्ने स्टाटस सेयर गर्दै पोर्चुगलमा २७ वर्षीय दिनेश सँधैका लागि विदा भए
फेरी अर्काे ख’तरा ! २ दिन पछि पृथ्वीमा उल्का पिण्ड खस्दै, वैज्ञानिकहरूले दिए यस्ताे चे’ता’वनी ।
अस्पतालबाट बाबुरामले भने : लोकतन्त्र रक्षाको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो!
१२ तोला सुन र नगद सहित १ पक्राउ
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6883)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (4008)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3468)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1485)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1238)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1182)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1147)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1126)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1049)
महान श्रीमान भनिएका बिनोद खड्काले पत्नि अनिता खड्कालाई धोका दिँदै अर्की महिलासँग गरे विबाह, बिनोदले अर्कैसँग विबाह गरेपछि हेर्नुहोस् के के भयो ? (909)
सामान्य लेखपढ भएकोलाई अमेरिकामा गएर काम गर्ने सुनौलो सुवर्ण अवसर!!!
टिकटकबाट चिनजान : होटलमा २ दिन सँगै बसे’पछि लु’टपा’ट